Hoggaamiyeyaasha dalxiiska LGBTQ+ ayaa ku shiray Atlanta 'isu keenidda qoyska'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » LGBTQ » Hoggaamiyeyaasha dalxiiska LGBTQ+ ayaa ku shiray Atlanta 'isu keenidda qoyska'
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Education • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Xuquuqda Aadanaha • LGBTQ • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Aroosyada Jaceylka Malabka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Shirweynaha Caalamiga ah ee IGLTA wuxuu ahaa soo -dhoweyn aad loogu soo dhoweeyey xoogaa caadi ah ka -soo -qeybgalayaashii, kuwaas oo midba midka kale la wadaagay sheekooyinkooda dhiirrigelinta leh ee dulqaadka xirfadeed, iyo sidoo kale fikradaha geesinimada leh ee hal -abuurka, amniga iyo ka -mid -noqoshada LGBTQ+ qaybta dalxiiska.
Shirweynihii 37aad ee IGLTA Global Convention wuxuu ahaa guul la yaab leh, iyadoo in ka badan 400 LGBTQ+ iyo xirfadlayaal safar oo isbahaystay oo matalayay 27 dal ay isugu yimaadeen Atlanta.
Waxaa jiray Goobta Iibiyaha/Alaab -qeybiyeyaasha, dhowr maalmood oo waxbarasho ah, dhiirigelin iyo isku xirnaan, iyo ururinta IGLTA Foundation, Voyage.
Caddaynta tallaal buuxa ama tijaabo COVID-19 oo taban ayaa loo baahday si loogu oggolaado dhammaan dhacdooyinka shirweynaha IGLTA.
Shirweynihii 37aad ee IGLTA Global wuxuu ahaa guul la yaab leh, in kabadan 400 LGBTQ+ iyo xirfadlayaal safar oo isbaheystay oo matalayay 27 dal Atlanta loogu talagalay Goobta Iibiyaha/Alaab -qeybiyaha, dhowr maalmood oo waxbarasho ah, dhiirigelin iyo isku xirnaan, iyo ururinta IGLTA Foundation, Voyage.
Caddaynta tallaal buuxa ama tijaabo COVID-19 oo taban ayaa loo baahday si loogu oggolaado dhammaan Ururka IGLTAn dhacdooyinka Atlanta, natiijaduna waxay ahayd soo -dhaweyn aad u -soo -dhaweyn ah oo heer caadi ah loogu talagalay ka -soo -qaybgalayaashii, kuwaas oo midba midka kale la wadaagay sheekooyinkooda dhiirrigelinta leh ee dulqaadka xirfadeed, iyo sidoo kale fikradaha geesinimada leh ee hal -abuurka, amniga iyo ka -mid -noqoshada LGBTQ+ qaybta dalxiiska.
Madaxweynaha/Maamulaha IGLTA John Tanzella
“Had iyo jeer waxaan dhahnaa IGLTA Shabakadda caalamiga ah waxay dareemeysaa sida qoyska oo kale, maxaa yeelay isku xirnaanta ganacsigu waxay noqdaan kuwo shaqsiyeed sanadihii la soo dhaafay, ”ayuu yiri Madaxweynaha/Maamulaha IGLTA John Tanzella. “Laakiin dib -u -kulankan ayaa runtii ahaa mid gaar ah ka dib 18 bilood oo ay kala maqnaayeen. Waxaad dareemi kartaa xiisaha dalxiiska LGBTQ+ fadhi kasta, waxayna kicisay kulan kasta oo ganacsi oo goobta ka dhacay. Waxaan aad ugu hanweynahay inaan hormuud ka noqonno dib -u -dhiska warshadahayaga. ”
Ka mid ah faa'iidooyinka badan:
Xafladdii furitaanka ee Aquarium-ka Georgia, halkaas oo martidu ku dhexmuuqdeen sida shimbiraha nibiriga, fallaadhaha iyo qoolleyda badda oo ku daba-jiray taangiga 6.3 milyan-gallon (23.8 milyan-litir).
Mu'asasada IGLTA Think Tank ee King & Spalding oo ay ku mideysan yihiin hoggaamiyeyaasha dhammaan qaybaha warshadaha dalxiiska iyo ururada LGBTQ+; dooddu waxay diiradda saartay is -goyska dalxiiska LGBTQ+ oo leh sinnaan guud, kala -duwanaansho iyo hindisyo ka -mid -noqosho, iyo sidii loogu soo noqon lahaa sidii warshado ka xoog badan oo soo -dhoweyn leh. Warbixinta kalfadhiga ayaa soo socota